Iloft etofotofo kwindlu endala - I-Airbnb
Iloft etofotofo kwindlu endala
I-loft yonke sinombuki zindwendwe onguMartine
Kwintliziyo yeNorman Switzerland kunye neendlela zayo zokuhamba intaba, imilambo kunye nokhenketho oluluhlaza. Ukuphosa ilitye ukusuka eClécy naseLa Roche d 'Oêtre kufutshane nesiseko senqanawa sasePont d' Ouilly ... iikhilomitha ezingama-45 ukusuka kunxweme oluneentyatyambo kunye neelwandle zokumisa.
Intuthuzelo kunye nomtsalane we-loft kwindlu endala ehlaziyiweyo! Kubathandi beendawo ezingaqhelekanga kunye nemiqulu! kunye nophahla oluphezulu kwigumbi eliphambili kunye negumbi lokulala elinomnyango ophantsi wokufikelela! ikhitshi elinezixhobo, igumbi lokuhlambela elinebhafu ye-spa, ukufikelela ngaphandle kwegadi, indawo yokungena eyahlukileyo.
4.75 out of 5 stars from 302 reviews
4.75 · Izimvo eziyi-302
Bonisa iingxelo zokuhlola eziyi302
Kwindawo esemaphandleni kunye nemisebenzi ezikufuphi yangaphandle (ukuhamba, ukunyuka intaba, okanye ngesikhephe, ukwenyuka, ibhayisikile intaba ... Sondela Roche d 'Oêtre kunye Clécy! Ukunyuka intaba ... iindlela ezilungileyo zokwenza ukuba ukwazi le ndawo mmandla eziphawuleka Lower eNormandy
Umbuki zindwendwe ngu- Martine
Ubukho bezinja ezinobuhlobo kubandakanywa inja enkulu edibeneyo i-Saint Bernard kunye ne-mastiff yaseSpain, i-teddy bear enkulu kodwa inamandla, kunye neekati ezimbini ... kukhetha abo bamthandayo abahlobo bethu izilwanyana !! Ukucaca, ifoto ifakiwe kwintengiso!
Ubukho bezinja ezinobuhlobo kubandakanywa inja enkulu edibeneyo i-Saint Bernard kunye ne-mastiff yaseSpain, i-teddy bear enkulu kodwa inamandla, kunye neekati ezimbini ... kukhetha…
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Ménil-Hubert-sur-Orne